कसरी कोरोनाभाइरस (लकडाउन) को उपायहरू व्यवहार गर्ने: व्यावहारिक सल्लाह: मार्टिन Vrijland
विगतका केही दिनहरू मलाई कोरोनाभाइरस प्रकोपको बारेमा प्रश्नहरूले भरिएको छ। मैले के गर्नु पर्छ? म कसरी सबै उपायहरूसँग व्यवहार गर्ने छु? सबै आउनको लागि म के तयारीहरू गर्छु? मसँग सकारात्मक समाचार छ। सकारात्मक समाचार यो हो कि यो स्पष्ट छ कि अधिक र अधिक मानिसहरू बुझ्छन् कि उनीहरू सामूहिक उन्मादका साथ खेल्दैछन्। मेरो पुस्तकमा म यो भन्छु 'महान भाइरस जसले हामीलाई गलत वास्तविकतामा राख्छ'।
यथार्थमा हामीले हेर्दा यो मिडिया र राजनीतिले नै निर्धारण गर्दछ। अधिक र अधिक व्यक्तिहरू यो हेर्न थाल्छन्।
निस्सन्देह यो भाइरस प्रकोप पूर्ण रूपमा स्टेज गर्न लगभग असम्भव देखिन्छ, तर यसको स्क्रिप्ट घटना २०१ 201 कोरोनाभाइरस अभ्यास त्यहाँ पहिले नै थियो र कोभिड १ out प्रकोप पहिले नै सुन्दर विश्व नक्शामा देखाईएको थियो त्यहाँ बजारमा आधिकारिक परिक्षण अघि। यो नक्कली मृत्यु वा नक्कली संक्रमण गर्न असम्भव देखिन्छ। वा यो सम्भव छ? र यदि हो भने, नरक किन तिनीहरू त्यसो गर्छन्?
त्यसोभए मानौं भाइरस वास्तवमै अवस्थित छ। हामी अझ पक्का छैनौं कि यो प्राकृतिक रूपमा उत्पन्न भएको हो वा प्रयोगशालामा डिजाइन गरिएको हो र दुर्घटनावश उम्किएको छ वा जैव हतियारको रूपमा फैलिएको छ। बायो-हतियारको विकल्प मानौं (केवल सोच प्रयोगको लागि)। यदि त्यहाँ सरकार वा आतंकवादी समूह रहेको छ भने, तपाईंले कहिले फेला पार्नुहुने थिएन, किनकि यसलाई फिर्ता पाउन सकिदैन। हामीलाई थाहा छ कि बिल गेट्सले २०१ 2017 मा फिर्ता भनेका थिए कि अर्को महामारी केवल एक कम्प्युटर स्क्रिनबाट आउन सक्छ (हेर्नुहोस् यहाँ).
हामी संक्रमणहरूको अविश्वसनीय स number्ख्या देख्छौं (सयौं लाखौं मध्ये केही हजार), तर यो दावी कोरोनाभायरसको पछाडि एक घनिष्ठ वृद्धि रहेको छ र शुरुमा संक्रमणको कम संख्या भए पनि, कुरा केही हप्ता पछि छ अनियन्त्रित हुन्छ। यदि यसलाई सँधै बोलाइन्छ भने डचले नियन्त्रणित प्रकोप देखा पर्दछ जसमा 60०% जनसंख्या प्रतिरक्षा फायरवाल बनाउन संक्रमित हुनुपर्दछ। मार्क रुट्टले त्यो समूह रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भनिन्छ।
त्यसोभए के तपाईंलाई थाहा छ कुनै बेला अनियन्त्रित विस्फोटले तपाईंलाई भाइरसको विस्तारमा ढिलाइ गर्न दिनेछ र घाता factor्ग कारक प्राप्त गर्दैन? तिनीहरूले यो विधि यूनाइटेड किंगडममा पनि लागू गर्छन्। अन्य देशहरू कूल लकको लागि जाँदैछन्। यस्तो देखिन्छ कि यो गैर-समान दृष्टिकोण चाँडै नै विश्वव्यापी रूपमा एक स्पष्ट दृष्टिकोणको साथ आउने एक कारण हुनेछ। हामीले मौसम उपायको सम्बन्धमा विश्व सरकारको लागि यस आह्वानलाई हेरिसकेका छौं।
जो कोहीले मेरो पुस्तक पढेका छन् उसले पत्ता लगाएको हुन सक्छ कि जब तपाईको जेबमा राजनीति र मिडिया हुन्छ र तपाईसँग ठूलो नेटवर्क हुन्छ सम्झौता कर्मचारीहरू समाजमा (जसले तपाईंलाई आय ग्यारेन्टी दिन्छ), यसलाई राम्रोसँग स्टेज गर्नु नै उत्तम हुन्छ। पहिलेको GDR मा आधिकारिक तथ्या .्कका अनुसार 1० जनामा ​​१ जना यस्तो थिए Inoffizielle Mitarbeiter। हामी सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सक्दैनौं कि सरकारहरूले मिडिया र अतिरिक्त पैसा कमाउने व्यक्तिको संयोजनमा प्रचार प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर चीजहरू बटुल्न सक्षम हुनेछन्। हामी सबै निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं कि सरकारहरूलाई यस स this्कटको आवश्यकता पर्‍यो।
यो आइपुग्न लागेको थियो। मैले यो संकट सुरु हुनुभन्दा धेरै अघि नै लेखेको थिएँ यो लेख जसमा मैले भनेँ कि पूँजिवाद कम्युनिज्मको लागि स्मार्ट रोडम्याप थियो। यो किनभने केन्द्रीय बै्कहरूले यति धेरै पैसाको छाप लगाए कि bण बबल ('सबै बुलबुला') अस्थिर भयो। त्यो मुद्रित पैसाको साथ, पैसा शून्य ब्याजमा ब्याज-मुक्त बहुराष्ट्रियहरूलाई ntण दिइयो। त्यस पछि, केन्द्रीय बैंकहरूले ती debtण धितो (बन्डहरू) फिर्ता किने। ठूला कम्पनीहरूलाई यसप्रकार गिरावट लिने प्रतिस्पर्धीहरू किन्न र उनीहरूको आफ्नै शेयरको मूल्य बढाउन (आफ्नै शेयर खरीद गरेर) ठूलो रकम दिइयो।
स्टक मूल्य कृत्रिम रूपमा उच्च रह्यो, जुन राम्रो देखिन्छ आर्थिक रूपमा। यद्यपि अधिक महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि यी कम्पनीहरू ठूला र ठूला हुन सक्दछन्, जबकि गैर-विशेषाधिकार प्राप्त कम्पनीहरू गिरे (किनकि उनीहरूले निःशुल्क पैसा पाएनन्)। अर्थव्यवस्था क्र्यास गरेर, सरकारहरूले अब ती कम्पनीहरूलाई खरिद गर्न र राष्ट्रियकरण गर्न सक्दछन्। र त्यसोभए तपाईं आफूलाई चाँडै भेट्टाउनुहुनेछ जुन हामी कम्युनिजम भन्छौं।
कम्युनिष्ट शासनमा तपाईले चाहानु भएको अन्तिम चीज स्वतन्त्र उद्यमी हो। तपाइँ चाहानुहुन्छ कि सबैजनाको आधारभूत आय छ र लगाईएको राज्य नियमहरुमा राम्ररी नाच्नुहोस्। नेदरल्याण्ड्स राज्यले (उदाहरणको रूपमा) हालैको दिनमा झडपमा के हासिल गरेको छ? सबैजना घरमै छन् र राज्यको समर्थनमा पूर्ण निर्भर छन्। दशौं अरबौं अचानक आधारभूत आय को साथ सबैलाई प्रदान गर्न उपलब्ध छन्। के तपाई कम्युनिज्मको बारेमा सोच्नुहुन्छ? त्यो त्यो साम्यवादको सकारात्मक पक्षमा देखिन्छ। कम्युनिष्ट विचार सैद्धान्तिक रुपमा धेरै सुन्दर छ।
राज्यले अब कोरोनाभाइरसको प्रकोपको रूपमा केही हप्तामा साम्यवादका सबै पक्षहरू महसुस गर्न सक्छ। त्यो योजना जस्तै गन्ध छ?
मलाई थाहा छ। तपाईले सोच्नुहुनेछ कि हाम्रा प्यारा डच मन्त्रीहरू र हाम्रा खुशीयाली मार्क रुट्टले कहिल्यै त्यस्तो नराम्रो योजनामा ​​काम गर्दैनन्। ठिक छ भने म तपाईंलाई सोध्छु: म कसरी मास्टरको पटकथाको बारेमा कुरा गर्न सक्छु कि त्यस्तो निरंकुश शासनको लागि प्रयास गर्दछ? मैले कसरी सही भविष्यवाणी गरें?
हामीलाई साम्यवादको कालो अनुहार पनि थाहा छ। हामी यसलाई पुरानो सोभियत संघ, जीडीआर, चीन र उत्तर कोरियाबाट थाहा छ। के तपाईंलाई थाहा छ अब तपाईंले यो कोरोनाभाइरस प्रकोपको बेला उहि अन्धकार अनुहार देख्नुभयो? हामी धेरै युरोपेली देशहरू र संयुक्त राज्य अमेरिकाका मानिसहरूमा सैनिक कुट्ने देख्छौं। हामी एक पूर्ण लकडाउनमा राखिएको छ। अझै नेदरल्याण्डमा छैन, किनकि नेदरल्याण्ड र बेलायतले उनीहरूको दृष्टिकोण राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन भनेर देखाउँनु पर्छ। अभ्यासमा, यसको अर्थ यो हुन सक्छ कि नेदरल्याण्ड र यूके मा कुल लकडाउन आउँछ र फ्रान्स र स्पेन भन्दा धेरै गाह्रो हुनेछ। हामी साम्यवादको अन्धकार अनुहार हेर्न गइरहेका छौं र यो तपाईंलाई एक आवश्यकताको रूपमा बेचिदैछ किनकि तपाईं भाइरसको प्रकोपमा विश्वास गर्न आउनुभयो।
म मेरो पुस्तकमा वास्तविक भाइरस वर्णन: 'महान भाइरस जसले हामीलाई गलत वास्तविकतामा राख्छ"। त्यो पुस्तकमा मैले भविष्यवाणी गरें कि त्यहाँ अर्को महामारी हुनेछ। वास्तविक भाइरस मिडिया र राजनीति मार्फत जनताको कुल हेराफेरी हो।
मेरो अनुमानमा हामी के उपायहरू लिनेछौं:
सैन्य र पुलिस पोष्टहरू
"दिशा निर्देशन र निर्देशनहरू" पालना गर्न दायित्व (आदेशहरूको पालना गर्नुहोस्)
संचार जासूसी (तपाईको आफ्नै "सुरक्षा" को लागी संक्रमित व्यक्ति वा अर्डर नगर्ने मानिसहरु पत्ता लगाउने बानामा)
सरकारी काउन्टरमा पैसाको अभाव र कतारहरू जुन 'समर्थन प्रदान गर्दछ'
नगदी र नगद मेशिनहरूको प्रयोगमा रोक जुन अब पैसा दिदैन
अनिवार्य घर संगरोध
बाहिरी क्वारेन्टाइन वा गैर-कन्फर्मिस्टहरूको कारागारका लागि आउन अनिवार्य (मानिस जसले "दिशाहरू" सुन्दैनन् वा सडकमा हुनु राम्रो कारण छैन)
ठूला डाटा विश्लेषणहरूबाट व्यक्तिहरू उठाउँदै तिनीहरू सम्भवतः विद्रोही छन् भनेर देखाउँदछ
अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण
अनिवार्य अनुप्रयोग तपाइँलाई टाढैबाट निगरानी गर्न
In यो लेख मैले पृष्ठभूमि जानकारी र त्यस्ता उपायहरूको परिणाम वर्णन गरे। के तपाईं केहि चीजहरू चिन्नुहुन्छ जुन हामी पुरानो सोभियत संघ, जीडीआर, उत्तर कोरिया र चीनमा साम्यवादबाट जान्दछौं? यस पटक यो केवल एक हड्डी खराब छ। म त्यसलाई "टेक्नोक्रेट साम्यवाद" भन्छु। त्यो साम्यवाद हो जहाँ प्रविधिले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र राज्यको केन्द्रीय सर्भरहरूबाट सबै कुरा निगरानी गर्न सकिन्छ। त्यो हामी चीनबाट पहिले नै जान्दछौं र त्यो अब युरोप र अमेरिकामा कर्नाभाइरस हाइप मार्फत द्रुत भइरहेको छ।
यदि तपाइँ सहयोग गर्नुहुन्न भने के हुन्छ? त्यसोभए तपाईं सम्भवत लक हुनुहुनेछ र यो तपाईंलाई जबरजस्ती गरिनेछ। हालसालैका वर्षहरूमा सबै कानूनहरू यस अनिवार्य "हेरचाह" लाई सम्भव तुल्याउनको लागि राखिएको छ। अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य सेवा ऐन १ जनवरी २०२० मा सक्रिय गरिएको थियो। मैले यस बारे वर्षौं चेतावनी दिएँ र even००० भन्दा बढी चोटि हस्ताक्षर गरिएको निवेदन पनि गरें। कुनै काममा छैन। हालको रुट्ट क्याबिनेट अन्तर्गत कानुनलाई सजिलै पार गरियो।
तपाईं अझै के गर्न सक्नुहुन्छ? के यो राम्रो हुनेछ तपाईको निष्क्रियतामा पार गरियोस् र त्यसपछि त्यो टेक्नोक्रेट कम्युनिष्ट शासनमा बाँचौं, आशा छ कि चीजहरू अझ रमाईलो हुनेछन्? अन्तमा, हामी सबै चीज हाम्रो लागि व्यवस्थित गर्न चाहन्छौं। अन्तमा, हामी पनि आधारभूत आय गर्न चाहन्छौं। अर्को केहि हप्ता काम नगरी राम्रो लाग्दछ।
इतिहासले सिकायो कि निरंकुश शासनहरूले सम्पूर्ण दमनको निम्त्याउँछ। त्यसोभए प्रश्न यो हो कि तपाइँ छोटो अवधिको लागि सुविधा र झुकाव छनौट गर्नुहुन्छ वा दीर्घकालीन प्रभावहरू विचार गर्नुहुन्छ कि गर्दैन।
मेरो पुस्तकमा म 'मास्टर स्क्रिप्ट' के हो भनेर ठ्याक्कै वर्णन गर्दछु। त्यो 'मास्टर स्क्रिप्ट' भविष्यवाणी गरिएको थियो र सबै बाहिर आउँछ। म तपाईंलाई आवश्यक विकल्पहरू पनि देखाउनेछु (व्यावहारिक सल्लाहहरू)। सबैभन्दा आवश्यक छनौट मात्र गर्न सकिन्छ यदि तपाईं A देखि Z सम्म सम्पूर्ण खेल देख्नुभयो। म यसलाई १ लेखमा राख्न सक्दिन, तर १ 1 पृष्ठमा राख्दछु। चाँडै अंग्रेजी संस्करण पनि। यसलाई आफैंमा लैजानुहोस् र तपाईंलाई के पर्खिरहेको छ जान्नुहोस्। मेरो पुस्तक राम्रो समाचार र अहिले सम्मको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक सल्लाहको साथ समाप्त हुन्छ, तर यसलाई एउटा लाइनमा संक्षेपमा प्रस्तुत गर्नु सार हो। त्यसोभए तपाईंले पुस्तकमा केवल वास्तविक व्यावहारिक सल्लाहहरू पाउनुहुनेछ। तपाईं यसलाई १ दिनमा पढ्न सक्नुहुन्छ। छोटो तर मीठो यहाँ पढ्नुहोस्
तपाईको पुस्तक खरीदको साथ तपाईले मेरो कामलाई समर्थन पनि गर्नु हुन्छ ताकि म जारी राख्न सक्दछु। म तपाईंलाई एक सदस्य बन्न बोलाउन चाहन्छु, किनकि तपाईंको समर्थन स्थायी हो र धेरै आवश्यक छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ लेखहरू साझा गर्नुहोस्, ताकि हामी आलोचनात्मक समूहमा पुग्न सकौं। तपाईं यो एन्टी-हिस्टेरिक्स भाइरसको घातीय असरको अंश हुन सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग एक बटनको स्पर्शमा शक्ति छ।
सामाजिक मिडिया छलफल: राज्य को कोरोनाभाईस संगरोध उपायहरू स्वीकार गर्न उपकरण?
ट्याग: दिशाहरु, नगद, communisme, नगद, कोरोनाभाइरस, Covid-19, बिरामी, विशेष, geld, निर्देशनहरू, पूंजीवाद, लकडाउन, उपायहरू, मार्क, सरकार, व्यावहारिक, रूट, राज्य, समर्थन, समर्थन संकुलहरू, te, सुझाव, wat
18 मार्च 2020 मा 14: 19
विलेम अलेक्ज्याण्डरलाई के थाहा थियो?
श्रीमान्‌ किंग विलेम-अलेक्ज्याण्डरले बुधबार बिहान, अप्रिल १ On को प्रदर्शनी 'CATAMINATED!' खोल्छ। Leiden मा Rijksmuseum Boerhaave मा। प्रदर्शनी प्लेग र बिफर जस्तै संक्रामक रोगको प्रकोपको बारेमा हो र त्यसले कसरी जीवनलाई बाधक बनाउन सक्छ।
18 मार्च 2020 मा 15: 32
र त्यसैले यो बच्चाहरूको लागि जान्छ .. सानाको लागि निरंकुश शासन।
निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्:
'विद्यार्थीहरूको लागि कोविड -१ schedule तालिका':
19 मार्च 2020 मा 17: 14
पोइन्ट १) पहिले बिहानको बिहानको खाजा, त्यसपछि नुहाउने र त्यसपछि प्याजा खोल्नुहोस्, यो मात्र हुन सक्छ जुन पूर्णतया दिमाग धुने युवा र उनीहरूका अभिभावकहरूले शाब्दिक रूपमा यो प्रदर्शन गर्नेछन्।
18 मार्च 2020 मा 19: 27
यो अब बेलुका 19.00 पछि भएको छ र तपाईंले चर्चको घण्टी बजिरहेको सुन्न सक्नुहुन्छ। के चर्चहरू अझै अवस्थित छन् र ती अहिले पनि खुला छन्? यस घडीमा? के यो मान्छे डराउने फेसनमा राख्नु, राख्नु हो? म एउटा नाडी लिन जाँदैछु, ढोका बाहिर जानुहोस् र दुईजना आइमाईहरूसँग कुरा गर्नुहोस् र उनीहरूले घोषणा गरे कि केही हप्ताको लागि, प्रत्येक अर्को हप्तामा, घण्टी कोरोन भाइरसको कारण बज्नेछ !!!
तिनीहरू धेरै हदसम्म उनीहरूको साइप ट्रान्स सम्मोहनको साथ जान्छन्। तिनीहरू आफैले यो विश्वास गर्नेछन्।
अब वा कहिले पनि "इल्युमिनेटी" को लागी छैन। अब रोक्नुहोस् मँ भन्छु "इलुमिनेटी" सामान्य गर्नुहोस्।
व्यक्तिहरू के हुन्छ त्यो सत्य हुँदैन।
18 मार्च 2020 मा 19: 51
18 मार्च 2020 मा 20: 04
व्यक्ति जो राज्यको तर्फबाट होमवर्करको रूपमा सोशल मिडिया छलफलहरू निगरानी गर्छन्। त्यसोभए तपाईं सफ्टवेयर पाउनुहुन्छ उहाँको बारेमा नकारात्मक कुरा भन्न र राज्यको एजेन्डाको रक्षा गर्न जहाँ नाम मार्टिन भ्रिजल्याण्ड देखा पर्दछ। पक्कै तपाईं यसको लागि एक सानो प्रशिक्षण प्राप्त। के त्यो हुन सक्छ? वा यसले त्यसरी काम गर्दैन? हैन? त्यो अर्को विचित्र षडयंत्र हो ... हो
18 मार्च 2020 मा 21: 17
महिला र सज्जनहरू) राम्रोसँग तपाईंले त्यसो भन्नु हुँदैन) .. स्पष्टताको लागि! यो कार्य भएको छैन। म दोहोर्याउँदछु यो अभिनय गरिएको छैन। त्यसमा कार्य गर्न सकिदैन किनकि मन्त्रीहरूले कार्य गर्दैनन्
18 मार्च 2020 मा 21: 27
चाखलाग्दो कुरा के छ कि एक पुलिस अफिसरको रूपमा तपाईंले अनुहारको मास्क लगाउनु हुँदैन। के तिनीहरू भाइरस प्रतिरोधी छन् वा तिनीहरूलाई थाँहा छ कि भाइरसको खतरा बकवास हो।
18 मार्च 2020 मा 22: 01
NOS समाचार आज .. "सुपरमार्केटहरू नगद भुक्तानी निषेध गर्न चाहन्छ" ओह यो यती स्पष्ट छ कुन स्क्रिप्ट रोल आउट हुँदैछ ..
18 मार्च 2020 मा 23: 50
नयाँ चुनावको लागि मात्र प्रतिक्षा गर्नुहोस् र विपरीत पार्टी हा हालाई मतदान गर्नुहोस्
यो बिर्सनुहोस्, प्रणालीमा समावेश गरीएको वास्तवमा मत दिनका लागि कुनै समकक्ष छैन।
बिरूद्ध टोलीले जोहन क्रुइफसँग लामो समयदेखि परामर्श गरेको छ कि कसरी सामना हुन्छ / हिहिहि जान्छ, राम्रो foeballuher उहाँ 😉 जोहान 😉 उहाँ जान्नुहुन्थ्यो र भन्न सक्नुहुन्थ्यो: "तपाईंले मात्र देख्नु भयो जब यो महसुस हुन्छ"
18 मार्च 2020 मा 23: 53
खेल महान क्रुफ द्वारा rigged, हो !!!
दोषी, ती मनमोहक मानिसहरू रुट्ट र क्रुफ, सुपर अभिनेताहरू
19 मार्च 2020 मा 20: 30
हामी कसरी तपाईंलाई महान बनाउन सक्छौं? संसारमा धेरै भेडा ...।
19 मार्च 2020 मा 00: 25
जानको लागि समय जानुहोस् मानिसहरू:
19 मार्च 2020 मा 00: 30
नेदरल्याण्ड्समा पूरा लकडा छनौट गरिएको छ भन्ने परिदृश्यका लागि पुलिस तयारी गर्दैछन, जसमा सम्पूर्ण समाज बन्द छ र मान्छे घरमै बस्नु पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा पुलिसले त्यस्तो आपतकालीन अध्यादेश लागू गर्नु पर्छ र आवश्यक परेमा "कडा हात देखाउनु पर्छ।"
19 मार्च 2020 मा 08: 34
यदि मैले सहि तरिकाले बुझे भने, 58 XNUMX मानिस मरेका छन्, जस मध्ये अधिकांशतः बुढा र पहिले नै बिरामी थिए। र यो तुलनात्मक रूपमा कम संख्याको लागि, समाज डराउँछ र उत्तेजित हुन्छ।
मान्छेहरू उठ्छन्। सिभिल कर्मचारीहरु तपाईको उच्च आदेश को अनुसरण गर्नु भन्दा पहिले सोच्नुहुन्छ। प्रश्नहरू सोध्नुहोस् र तपाईंको सहकर्मीहरूको साथ तपाईंको श्रेष्ठको आलोचनात्मक हुनुहोस्
19 मार्च 2020 मा 17: 19
र यो हुनलाई भर पर्नुहोस्, किनकि यदि तपाईं पनिकको लागि पर्खनु सक्नुहुन्छ यदि एक दिनमा २००० नयाँ केस थपियो भने। त्यसोभए मिडिया आदिमा पनीक यत्तिको विकिरण छ कि सबै जना आतंकित हुन्छन्। र त्यसपछि नेदरल्यान्डमा लकडाउन १० पटक कडाईका साथ प्रस्तुत गरियो जुन अहिले स्पेन र फ्रान्समा छ। त्यसोभए तपाईले एउटा यस्तो अवस्था प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ मानिसहरूले नेदरल्याण्डबाट उत्तर कोरियामा भाग्न खोज्छन्।
19 मार्च 2020 मा 10: 51
20 मार्च 2020 मा 00: 46
मार्टिन तपाईं एक नायक हो। धेरै ज्ञान भएको मानिस। दुर्भाग्यवस, त्यहाँ अझै धेरै भेडाहरू छन्। मानिसहरू मिडियालाई अन्धाधुन्ध विश्वास गर्छन्। यो तथाकथित "पंजे" भन्दा बाहिर चलाउछ। मलाई डर छ तपाईंको सिद्धान्त वास्तविकतामा परिणत हुनेछ। के हामी यो केटालाई मात्र हुन दिन सक्दैनौं? खोप आवश्यक छ। म यसको बारेमा सोच्दिन !!!!! तपाईंको पुस्तक मार्गमा छ। म यो पढ्न प्रतीक्षा गर्न सक्दिन अब र त्यसपछि एक पेट भावना को एक बिट प्राप्त गर्नुहोस् (कि सम्पूर्ण तथाकथित कोरोना भइरहेको देखि)
« मन्त्री बिजलेभल्ड सेना थप “कैदी ठाउँहरू” को साथ तयार छ र कोरोनाभाइरसको स crisis्कटमा सुव्यवस्था कायम गर्न अपडेट: दशौं अरबौं प्याकेज समर्थन
डा। द्वारा कोरोनाभाइरस आतंकमा आश्चर्यजनक अन्तरदृष्टि। वोल्फग्यांग वोडर्ग? »
कुल भ्रमण: 1.422.801